Isibonelelo esingabuyisekiyo: se- $ 9 uya kuba nayo le ngqokelela yezilwanyana ezintle | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Isivumelwano esikhulu kwipakethe ye-watercolor entle yezilwanyana-gcina ukuya kuthi ga kwi-68%
Phantse kwinyanga ephelileyo sakhupha ifayile ye- Unikezelo olungenakuguqulwa kwibala lesiphumo yeFotohop. Namhlanje sinenye ebalaseleyo ene ingqokelela yemizobo yezilwanyana emnandi ngethoni entle esimana ukujonga imixholo ethile.
Sijongene nepakethe ye-watercolor yezilwanyana ezintle ezithi Iphawuleka ngezinto ezingama-65 zemizobo kwifomathi yePNG kwaye ezo zahlulahlulwe ngumzobo olula, kodwa oko kunako ukuthimba ingqalelo yakhe nawuphina undwendwe okanye umfundi wewebhusayithi yethu. Kwaye kubiza kuphela i-9 yeedola qhubeka nokuyazi ngokweenkcukacha ngezantsi.
1 Umxholo wengqokelela entle yamanzi yezilwanyana
2 Iqoqo lamanzi aqokelelweyo izilwanyana: izilwanyana zasefama
3 Ukuqokelelwa kwezilwanyana eziMnandi zeWatercolor- Izinto ezihombisayo zeentyatyambo
4 Ukuqokelelwa kwezilwanyana eziMnandi zaManzi aManzi: Ukwenziwa kweeVase ezinkulu kunye neeKona
5 Iqoqo lamanzi aqokelelweyo izilwanyana-izidalwa zaselwandle kunye nezinto
6 Ukuqokelelwa kwezilwanyana eziMnandi zaManzi aManzi: Iqanda lePasika
Umxholo wengqokelela entle yamanzi yezilwanyana
Kufuneka kuthiwe ukuba ufumana ingqokelela yezilwanyana ezintle kwi-watercolor oya kuba nayo phambi kwakho Inguqulelo eyandisiweyo yepakethi. Oko kukuthi, ungayisebenzisa ngokungasikelwanga mda ngokobuqu nangokorhwebo.
La umyili wale pakethi ubizwa ngokuba nguNastia Smiyan Ukusuka kwiwebhusayithi yakhe kwimarike yokuyila ubonakalisa italente yakhe ngothotho lwezinto eziqokelelweyo zemixholo yemixholo eyahlukeneyo, nangona zijolise kakuhle kwi-watercolor; leyo iphatha ngokugqibeleleyo zombini izinto oza kuzifumana kwingqokelela yezilwanyana ezintle kunye nezinye ezinayo kwivenkile yayo yewebhu.
Xa uwonke uyakuzuza kuko konke oku:
Zonke iifayile zikwifomathi yePNG kunye nemvelaphi ebonakalayo ebonakalayo.
Ifayile nganye yahlulwe yaya kwifayile enye.
Zilungiselelwe ngokugqibeleleyo ukuba zisetyenziswe kwiAdobe Photoshop.
La ezahlukeneyo zezinto zemizobo kolu qokelelo lwezilwanyana ezintle koku:
Iifama ezili-19 enobukhulu beepikseli ze-1500-5000 kunye ne-300 dpi.
Izinto ezili-12 zokuhombisa zeentyatyambo (iiphikseli ezingama-1000-2000; 300 dpi).
Iikona ezine zeentyatyambo ezinkulu (ii-pixels ezingama-4-5000; 5000 dpi).
Iziko le-4 kunye neekona zokwakheka ezinobungakanani beepikseli ezingama-8000 x 4000: 300 dpi.
Izinto ezili-15 zolwandle kunye nezidalwa njengokongezwa ngemilinganiselo ye-3000 - 7000 pixels; 300 dpi.
Izinto ezili-11 zamaqanda eIsta njengokongeza: iiphikseli ezili-1500 - 3000: 300 dpi.
Njengoko besitshilo, ukuba ucwangcisa ukuthengisa ezi zinto kwimizobo yakho, kunye nelayisensi eyandisiweyo uya kuba nelungelo lokwenza njalo. Kukho uhlobo oluqhelekileyo, kodwa lilinganiselwe ngaphantsi kweeyunithi ezingama-500, ke ukuba ufuna zona kwiarhente yakho okanye owakho umsebenzi njengomyili ozimeleyoSincoma ukuba ungaphoswa sesi sibonelelo sikhethekileyo nayo yonke loo mizobo ye-watercolor.
Inyaniso leyo zonke zinomgangatho omninzi kwaye banikwe olo thando sijonge kulo xa sifuna ukubonisa incwadi, ukugcwala kwiwebhu okanye ibhlog enomxholo wabantwana okanye sifuna ukwenza i-eCommerce kunye noyilo oluthile olukholisa undwendwe; kunjalo nje, ungaphoswa zezi zinto zewebhu kuyilo.
Siza kuvavanya imeko nganye yemizobo yoku ingqokelela yamanzi yezilwanyana ezintle. I-Cuckoos ligama elikhethwe ukubonisa indlela ezonwabisa ngayo kwaye zinobuhlobo nganye kwezi zikule pakethe. Ziphose kuyo.
Iqoqo lamanzi aqokelelweyo izilwanyana: izilwanyana zasefama
USmiyan usizisela uthotho lwezilwanyana ezihlala zibonwa ezifama kwaye ziyakwazi ukwenza imeko eyahlukileyo anokuthi awele umlimi kubomi bakhe bemihla ngemihla. Iigusha, Imivundla, amadada, iihagu, iinkukhu, umqhagi kwaye igusha ene-daisy entle ibonisa elona cala layo lihle.
Uthotho lwezilwanyana ezinamanzi ezibonisa ukungakhathali, ukonwaba kunye nalawo mafama ahlala esenzeka ngaphandle koxinzelelo kunye nomnqweno omkhulu wokwazi ubudlelwane babo.
Ingqokelela yezilwanyana zasefama inkulu imibala eyahlukeneyo kunye nomzobo olula Ezona zinto zibalulekileyo kwisilwanyana ngasinye esihlala kwifama. Le hagu kunye nombala wayo opinki, intshontsho ledada kunye nonina belisoloko lihamba, umvundla osemva komnqathe kunye nezo gusha zincinci zihlekisayo ezineetoni ze-pastel ezimfanelayo.
Kolu luhlu lwezinto ezibonisa eyona nto iphambili ekuqokeleleni izilwanyana ezintle zamanzi. Akukho kunqongophala kwezo mali kunye nokuhlamba okubeka eyona nto ibalulekileyo yokuyisa kuthi Iwebhu iyasebenza okanye ibhlog enomxholo wabantwana.
Iyonke Kukho imifanekiso ye-19 ye-watercolor eya kuba yeyakho ukuba uthenga le ngqokelela yehliswe ngama-68% kulo msitho.
Ukuqokelelwa kwezilwanyana eziMnandi zeWatercolor- Izinto ezihombisayo zeentyatyambo
Ngeli xesha, kulandela i-watercolor njengeyona ndlela iphambili yokuqokelela, sinothotho lwezinto zeentyatyambo ezihamba ngeentyatyambo ezahlukeneyo ngemibala yazo ebomvu, epinki, e-violet kunye nephuzi. Akunjalo ukuba isebe eliluhlaza alikho ukuhombisa indawo ethile thinab apho sifuna ukuzalisa ngobume obusebenzayo nobulula.
Kukho izinto ezili-12 ezine Ubungakanani beepikseli ezili-1000 x 2000 ukuze ubungakanani njengoko ufuna. Umzobo olula ngaphandle kwempumelelo yokufikelela ngakumbi kumbono osebenzayo wentyatyambo ekwimibala yayo eyahlukeneyo enjengamazwi e-violet, ebomvu okanye eluhlaza okwesibhakabhaka.
Akukho nto ingako uyithethayo ngezi zinto zeentyatyambo zokuhombisa zinokuthi zibekho kwiPNGr esetyenzisiweyo kunye nokubonakala kwakho kunye nokwenza iiseti zethu ngokudibanisa ezininzi zazo. Kunoko, le nto yile nxalenye yokuqokelela izilwanyana ezintle kwi-watercolor.
Ngoku kuphela khetha ukuchukumisa kuyilo kunye nokukwazi ukudibanisa ezo ntyatyambo kwaye zenze izihombiso ezintle ezibonakala zintle nakweyiphi na indawo eziza kulayishwa zibekwe kuyo.
Ukuqokelelwa kwezilwanyana eziMnandi zaManzi aManzi: Ukwenziwa kweeVase ezinkulu kunye neeKona
Ezi zinto zidityanisiweyo kunye neekona zenzelwe ukubandakanya izinto ezahlukeneyo ezinomdla kunye nokubetha. Landela ubugcisa obufanayo bayo yonke ingqokelela yezilwanyana ezintle kwi-watercolor ukuze ngomzobo olula nolula bamelwe ukusuka kwi-canaries ukuya kumaqanda wepasika okanye nakudada.
Zonke iziqulatho ezenziwe uninzi lwezinto esizifumanayo kwezinye iipakethi ezinje ngee-violets, amasebe aluhlaza okanye ezo ntlobo zamaqamza. Akukho kunqongophala kwamaqanda e-Ista okanye cephalopod entle ezimfusa.
Uthotho lweendidi zomgangatho opheleleyo dibanisa ukuya kuthi ga kwisibhozo. Ubungakanani buqala kwiiphikseli ezingama-5.000 8.000 ukuya kwiiphikseli ezingama-XNUMX. Oko kukuthi, ungabadibanisa kunye nabanye ukwenza ileta yokugubungela, isimemo kumhla wokuzalwa komntwana okanye nasemtshatweni ukuba siyayazi indlela yokuyibeka ngokufanelekileyo.
Iqoqo lamanzi aqokelelweyo izilwanyana-izidalwa zaselwandle kunye nezinto
Kwaye izilwanyana ezichitha ubomi bazo elwandle okanye elwandle azinakuphoswa kule ngqokelela yezilwanyana ezintle kwi-watercolor. Sithetha ngezidalwa zaselwandle ezikwanjalo iboniswe kakuhle leli gcisa ligama linguSmiyan.
Asizukufumana nto ingaqhelekanga ngale nto iqela lezinto ezili-15 kunye nezidalwa zaselwandle, ukusukela kwinto enokuba yi-octopus, i-sperm whale, i-seahorse okanye i-clown fish. Olu luhlu lwezinto zasemanzini ezize ukubonisa inani elililo lamabali kunye namabali. Singaphoswa kukwahluka ngakumbi kokubini kwiindidi zentlanzi nakwimibala, kuba iblue isetyenziswa kwiithoni ezahlukeneyo.
Singathetha malunga oononkala, iinkumba kunye nezinye ii-crustaceans ogcwalisa umhlaba waselwandle kunye nabo bonke esibafumana kolu luhlu kwaye benza ingqokelela elungileyo ukuze sikwazi ukuyisebenzisa kwimisebenzi eyahlukeneyo. Ngayiphi na imeko, into nganye yemizobo esinayo xa sithenga inexabiso elikhulu
Kuluhlu olufakwe kolu luhlu zezi ezinxulumene neetropiki ezahlukileyo kwezinye ngokuba nezikhwenene, ii-toucans, ii-hummingbirds kunye ne-chameleon kwaye ingaba yintoni iqokobhe lolwandle. Gcwalisa olu luhlu lwezilwanyana ezintle ukuba ube noluhlu oluphantsi kwebhanti lethu kwaye ukwazi ukuphendula kwimisebenzi yazo zonke iintlobo zabaxumi.
Ukuqokelelwa kwezilwanyana eziMnandi zaManzi aManzi: Iqanda lePasika
Kwaye ngalo mhla ukhethekileyo, ejolise ngakumbi kubaphulaphuli baseAnglo-Saxon, Kolu qokelelo lwezilwanyana ezintle zamanzi sinamaqanda epasika. Olu luhlu zizinto ezi-8 zizonke ezisuka kwii-Iqanda leePasika ngokwazo zisiya kwiibhasikithi apho singazithatha khona.
Iindidi ezintle zeebhasikiti zokuhombisa nazo zongezwa kuzo ube nakho ukuhombisa izinto ezahlukeneyo zePasika Njengamakhadi emibuliso. Sinokudibanisa amaqanda epasika kunye neebhasikithi ezingenanto ukuze siyile ngakumbi kwaye sibe negalelo kwinto yethu.
Akululanga ukufumana izinto ezinomfanekiso okhethekileyo wamaqanda e-Ista anezitampu ezahlukileyo njengoko kusenzeka ngale ngqokelela apho ishumi elinesibhozo lidityaniswa nobukhulu kwisisombululo esihambayo ukusuka kwi-1.500 ukuya kwi-3.000 pixels.
Ngamafutshane, a Ukuqokelelwa kwezilwanyana ezintle zamanzi ezidibeneyo kukufumana kakhulu ukuba uyayithenga. Ingakumbi ungonga phi ukuya kuthi ga kwi-68% yexabiso layo lokuqala. Kwaye uya kuba nazo ezandleni zakho ezo zilwanyana zintle zipeyintwe kwi-watercolor ukuze uzibonakalise kuzo zonke iintlobo zomsebenzi, nokuba zikwiwebhu okanye ukuba ufuna ukuziprinta kumatshini wokushicilela.
Ke unayo Esandleni sakho umnikelo ongenakuphikiswa: ingqokelela yezilwanyana entle yamanzi ye-9.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Isivumelwano esikhulu kwipakethe ye-watercolor entle yezilwanyana-gcina ukuya kuthi ga kwi-68%
Uyenza njani imisebenzi emininzi ngaphandle kokuphazamiseka njengezinto ezilungileyo
3 Izizathu zokuba kutheni ukusebenzisa i-Wordpress kungumbono olungileyo